Friday February 07, 2020 - 19:04:43 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Asaaska iyo soo shaacbaxii Saxwooyinka Islamiga inta badan waxa ay Soomalidasi lama filaana uga soo ifeen horaantii Sanadskii 1990-aadkii ,kadib markii ay Meesha ka baxday Dawladii Shuuciga ahayd ee cabudhinta iyo la dagalanka ku haysay dhalinyarada aamin sanayd soo celinta nidaam ka gadisan kii ay Suufiyadii culimadu dadka ku dhaqayeen dawladahana ugu sacab tumi jireen.
Inta badan ma’aha wax lala yaabo in Dunida marba wax si wayn isoo butacaan ,Diintuna isbedaladaasi ayuunbay qayb ka tahay.Hadaad sooyaalka taariikheed dib u milicsato waxaa kuu muuqanaysa in aanay Dunida jirinwax jiritaankiiso sugnaanaayo illaa abid oo aan ahayn Ilahay SWC .
Inkastoo dadka badani aamin san yihiinba inSaxwooyinku ay masuul buuxa ka yihiin Fikiradaha khaldan ee maanta Dunida Muslimka kusoo biiray sida Qaraxyada iyo dilalka argagaxa leh ,hadana inta ay dheef soo kordhiyeen cidina iskama indha tiri karto sida dhismaha Caqiidada Rooxaanigaa iyo hanaanka mashruuca saxa ah ee dhanka cibaadooyinka joogtadaa.
Dadka Somalida ahi sida caadada ah meelkasta oo ay joogaan waxaa hubaala in ay jeclaan lahayeen in mar uun ay arkaan Dawlad Islaami ah oo dhulkooda maamusha,waxanay arintaasi ka tahay waa rabitaan Imaani ah iyo kalsoonida ay ku qabaan Diinta oo ay weheliso ku hungawga nidaamyadii lagusoo xukumay oo aanay midna mahadin.
Soomalidu 100% waa Muslim,lakiin Somalidu100% waxay ahayeen dad culimadooda Diintu ay ka dhisto dhanka Imaanka Ruuxigaabalse aan la barin lagana dhisin dhanka ismaamulka Diinaysan iyo nidaamka dhaqalaha Dunida iyo qaabka loo maamulo,waana mida keentay in Somalidu ay Diinta u aragta uun nidaam Aakhiro lagu Janno tago.
Balse hadii aynuinagu adeegsan wayno Ilbaxnimada aynu leenahay ee iminka shaqaysa iyo Dunidu habka maanta looga macaamilo xoriyada,dhaqaalaha,maamulka, tiknolajiyada,sayniska iwm ,saw ma ogid in aynaan geedkaasi gaadhayn.
Taas waxaa raaca dadkana ay u sheegaanin ayDunida iyo dhal-dhalaalkeeda in ay isaga fogaadaan si aanay ugu kadsoomin,balse iyagu/Wadaadadu iyaga ugu jecel dhaldhalaalka Dunawiga ah,mana aha Sunahii Nabigeenii suubanaa SCW.
Imisaa Masjid qurxoon oo Janno lagu raadinaayo ayaa magalooyin keenaka dhisan, toban qofna aanay ku Tukan,sidoo kaleimisaa Caruur Agoon iyo Rajo ku darxumaysan Masaajidaasi agagaarkooda,Culimooy jidka Janada loo maraayo Quraanka dib uga fiiriya.
Laba kala daaya ,Wadaadoow in aad tidhaahdaanDunidu waa daarta iyo quruxda loo sameeyey Gaalada, Muslimkuna waxa uu wax ku leeyahay Aakhiro. hadana aad nagu wacdidaanAakhirana waxa ay rabto in loo shaqaysto,taas awadeed waxaa dadka caqliga lihi iswaydiinayaa oo Janadiiba hadii ay shaqo u baahan tahay maxaa diidaaya inAduunyadana Iyana loo shaqaysto oo Gaalka looga dheereeyo.